ပြည်တွင်းသတင်း – MYANMAR ARTICLE
ပုံပါ သူတို့ နှစ်​ဦးသည်​ ကလေးကို ခဏထိန်းပေးမယ်ဆိုပြီး ခေါ်သွားတာ ၂ လပြည့်ပြီတဲ့
ရန်​ကုန်​တိုင်း ရန်​ကင်း မိုး​ကောင်း ၁၂ရက်​ကွက်​ကာယသုခလမ်း အိမ်​အမှတ်​ ၆၀ ​နေ့. ဦးတင်​လှ.​ဒေါ်တင်​ရီ သမီး ​ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ နှင့်​ ဦးဇင်းသူရိယ ​ခေါ် ဦးဂျစ်​တူး ပုံပါ —
အရေးကြီးသတင်း.. မိန်းကလေးငယ်လေးတွေခိုးပြီး မုဒိန်းကျင့်နေသူ
ဆိပ်မူ အရေးကြီးသတင်း 18-5-2019= ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူကျေးရွာ အတွင်း ကဆုန်လပြည့်နေ့ မှော်မင်းသားတို့ ပရဟိတ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ရှေ့မှာ ကုသိုလ်လုပ်နေချိန် နောက်မှာ ကလေးသုံးယောက်ကို —
ပင်းဘောကျေးရွာလူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှ တရားခံဓါတ်ပုံအားမိုးကောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန် မိုးကောင်း မေ ၁၈ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ပင်းဘောကျေးရွာအုပ်စု၊ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာနေ GTC ကျောင်းဆရာမအားနေအိမ်တွင်သတ်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ တရားခံ၏ ဓာတ်ပုံနှင့်အချက်အလက်များကို မိုးကောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားရှိကြောင်းသိရသည်။ တရားခံအားတွေ့ရှိပါက ပင်းဘောနယ်မြေရဲစခန်း ဖုန်း( ၀၇၄-၆၆၁၁၉/၀၉၄၃၀၈၂၆၂၄) —
တံတားဆောက်တဲ့ သစ်ဖိုးငွေ မပေးချေးလို့ဆိုပြီး သစ်ကုန်သည်မှ တံတားကို မီးရှို့
သစ်ဖိုးငွေမပေးသဖြင့် ပေါင်းတည်မြို့ ညောင်နီပင်အုပ်စု စူးပုတ်စမ်း တံတားအား သစ်ကုန်သည် မှမီးရှို့ ပေါင်းတည်မြို့ ကျေးလက်လမ်းဉ်ီးမှ တံတားဆောက်လုပ်ရန်အတွက် သစ်ဝယ်ရာ သစ်ဖိုးငွေပေးချေခြင်း မရှိ၍ သစ်ကုန်သည်မှ တံတားတစ်စင်းအား —
ရှယ်ပေးလိုက်ကြပါ သူငယ်ချင်းတွေဖူးရအောင်ထူးခြားအံ့ဖွယ် မန်ကျည်းတုံးအတွင်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပုံ​တော်​ ပေါ်နေပုံ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အရာတော်မြို့နယ် ရွာသစ်ကျေးရွာမှာပါသိန်းရွှေကြည်#crd ရှယ်ပေးလိုက်ကြပါ သူငယ်ချင်းတွေဖူးရအောင်ထူးခြားအံ့ဖွယ် မန်ကျည်းတုံးအတွင်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပုံ​တော်​ ပေါ်နေပုံ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အရာတော်မြို့နယ် —
ကနဦးသတင်း.. ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်း လူ (၉) ဦး သေဆုံးတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုကြီးဖြစ်
ကနဦးသတင်း.. လူ (၉) ဦး သေဆုံးတဲ့ ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်း ယာဉ်တိုက်မှုကြီးဖြစ် 18.5.2019 ဒီ​နေည​နေ 5နာရီ​လောက်​က ​ရွေပြည်​သာ တံတားအဆင်းတွင်​ ဘုရားဖူးကားနှင့်​ အုပ်​သဲ​ကျောက်​ကား တိုက်​၍ —
သိန်း​ပေါင်းတစ်​​ထောင်​​လေးရာ​ကျော်တန်ဖိုးရှိ စိန်​၊​ရွှေ၊​ငွေရတနာများ ခိုးသွားသူကို ဖမ်းလိုက်ပြီ
မြဝတီမြို့၊​ အင်​ကြင်းမြိုင်​​ကျေးရွာ ​ရေ​ပေါ်​ဈေးတွင်​ခ​လေးငို​နေလို့ နို့ဗူးယူခိုင်းရာမှစိန်​၊​ရွှေ၊​ငွေရတနာများသိန်း​ပေါင်းတစ်​​ထောင်​​လေးရာ​ကျော်​ ခိုးယူ သွား​သော တရားခံ​ကျော်​​ကျော်​(ခ)အဏ္ဏဝါ(ခ)ဟာဆန်​ (ခ)အငယ်​​ကောင်​အား သုံးခွမြို့နယ်​ ကတုံး​ပေါ်​ကျေးရွာနယ်​​မြေရဲစခန်းမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်​။ ယခုအမှုကိုကျွန်​​တော်​​မောင်​ဘီဝမ်းမှတရားလို၏အကြိမ်​ကြိမ်​အကူညီ​တောင်းခံမှု​ကြောင့်​ ဆု​ကြေး​ငွေထုပ်​ပြန်​လိုက်​ပြီး​နောက်​ပိုင်းသတင်း​ပေးသူ​သံလျှ င်​မြို့​နေသူ​ မောင်​ဇေယျာလင်းနှင့်​ ကျွန်​​တော်​​မောင်​ဘီဝမ်းတို့ —
ရိုးရိုးသားသား အကြော်ရောင်းနေတဲ့ အကြော်သည်ကို မဝယ်ပဲခေါ်ပြီး ရန်စအနိုင်ကျင့် ခုနက မြင်​​တွေ့ရတာ စိတ်​ကို မ​ကောင်းဘူး😭😭 သူ့ကိုယ်​သူ ရိုးရိုးသားသား လုပ်​​ကိုင်​စား​သောက်​​နေတာကို ​၀ယ်​မယ်​ဆိုပြီး ​ခေါ်တယ်​တဲ့. ပြီး​တော့ —
နေ့ခင်းဖြစ်ဖြစ် ညဖြစ်ဖြစ် သတိနဲ့နေကြပါ။ မန္တလေးမြို့မှာ နေအိမ်အတွင်း ဝင်ရောက် လုယက်
မန္တလေးမြို့မှာ နေအိမ်အတွင်း ဝင်ရောက် လုယက်မှုဖြစ်ပွား မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ဒေါနဘွားရပ်ကွက်တွင် မေလ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်က နေအိမ်အတွင်း ဝင်ရောက် လုယက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည် —
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ သင်လှူလိုက်တဲ့ ငှက်ပျောပွဲတွေက ဒီလိုနေရာတွေကို ရောက်ကုန်ပါတယ် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အုန်းသီးနဲ့ငှက်ပျောဖီးတွေအများကြီး ဆွမ်းတော်တင်ကြပါတယ်။ ဘုရားပေါ်က ဝန်ထမ်းတွေဟာ အဲဒီငှက်ပျောသီးစိမ်းတွေနဲ့ အုန်းသီးတွေကို တစ်ရက် နှစ်ကြိမ် —